IMozilla yethule ukwesekwa nokuthuthuka kwensizakalo ye-imeyili engaziwa | Kusuka kuLinux
IMozilla yethule ukwesekwa kwe-AVIF nokwakhiwa kwensizakalo ye-imeyili engaziwa
Abathuthukisi beMozilla bayaqhubeka nomsebenzi wabo yize kufanele bakwenze besemakhaya abo ngenxa yenkinga yamanje yeCoronavirus (Covid-19). Futhi yilokho esanda kukhishwa izindaba zokuthi bangenephi ukuthuthukiswa kwensizakalo ye-Firefox Relay, evumela ukwenziwa kwamakheli we-imeyili wesikhashana ukubhalisa kumasayithi futhi okuhloswe ngawo ukugwema ukufaka ikheli le-imeyili langempela lomsebenzisi.
Le nsizakalo entsha ihlose ukuba lula ngokwedlulele ngoba ngokuchofoza okukodwa umsebenzisi angathola i-alias engaziwa (i-imeyili) ehlukile lapho ezoba nethuba lokuqondisa kabusha ekhelini langempela lomsebenzisi.
Ukuze usebenzise insiza, kuhlongozwa ukufaka i-plugin okuthi, uma kwenzeka isicelo se-imeyili kwifomu lewebhu, sizonikeza inkinobho yokukhiqiza i-alias entsha ye-imeyili.
I-imeyili ekhiqizwayo ingasetshenziselwa ukufaka amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza, kanye nokubhaliselwe. Ama-alias ahlukile angenziwa kusayithi ngalinye.
Inhloso yokusebenzisa le nsizakalo kusuka eMozilla, ukuthi umsebenzisi angakwazi ukulawula ngokugcwele okubhaliselwe kwakhe kumawebhusayithi (izinkundla, ubulungu, ukufinyelela, njll.) futhi uma kwenzeka umsebenzisi athola noma yikuphi okuqukethwe kogaxekile noma okunye okuqukethwe okungahlangene nakancane nesayithi etholwe kulo, kuzocaca ukuthi leyo webhusayithi iyini umthombo wokuvuza kwedatha noma othengisa imininingwane kumikhankaso yokukhangisa.
Ngaphezu kwalokho, lapho kwenzeka ukugqekezwa kwensiza noma ukuvuza kwedatha yomsebenzisi, abahlaseli ngeke bakwazi ukuhlobanisa ikheli le-imeyili elicaciswe ngesikhathi sokubhaliswa nekheli langempela le-imeyili lomsebenzisi.
Mayelana nokusetshenziswa kwensizakalo, ngaphezu kokunikeza obekuvele kushiwo, Kubaluliwe futhi ukuthi kuhloswe ngakho ukunikeza amandla woku ukuthi umsebenzisi nganoma yisiphi isikhathi, angakwazi cisha i-imeyili oyitholile futhi awusayitholi imilayezo ngayo.
Ukuze usebenzise umkhiqizo, isimemo kufanele sicelwe (Kungenziwa kusuka kusixhumanisi esilandelayo). Njengoba isandiso sisesigabeni sokuhlola, abasebenzisi bangasijabulela kuphela ngokwamukela isimemo.
Lapho uthola imvume yesimemo, i-Firefox Private Relay izotholakala njengesengezo se-Firefox. Konke umsebenzisi okumele akwenze ukuya ku-plugin bese wenza ama-alias esikhundleni sekheli le-imeyili.
Uma inqubo isiqedile, umsebenzisi angafaka ama-alias e-imeyili ngokuchofoza okukodwa nje. Manje sekulula ukugcwalisa amafomu aku-inthanethi, ukubhaliswa kwama-akhawunti amasha, okubhaliselwe kwezindaba, nokuhanjiswa kwesicelo soxhumana nabo.
Ukusekelwa kwesithombe se-AVIF
Ukwesekwa kokuhlola kwefomethi yesithombe se-AVIF (Ifomethi yefomethi ye-AV1) ingezwe kusisekelo sekhodi isetshenziselwe ukulungiselela ukwethulwa nguFirefox 77, esebenzisa ubuchwepheshe be-intraframe compression of the AV1 video encoding format (esekelwa yiFirefox 55).
Ifomethi yefayela lesithombe le-AV1 ichaza amaphrofayili amaningi, ekhawulela i-syntax evunyelwe nama-semantics we-AV1 bitstream. Amaphrofayli achazwe kulokhu kuchazwa alandela izingqungquthela zokucaciswa kwe-MIAF.
Ifomethi yefayela lesithombe se-AV1 isekela izithombe ezinobubanzi obuphezulu (I-HDR) nebala lemibala ebanzi (WCG), kanye nebanga elijwayelekile elinamandla (SDR). Isekela izithombe ze-monochrome nemifanekiso yeziteshi eziningi ngakho konke ukujula okuncane nezikhala zombala ezichazwe ku-AV1.
Ifomethi yefayela lesithombe le-AV1 futhi isekela izithombe ezingqimba eziningi njengoba kucacisiwe ku- [AV1] ukuze zigcinwe kuzinto zombili zezithombe nokulandelana kwezithombe.
Ifayela le-AVIF lenzelwe ukuba yifayela elihambisana ne-HEIF lezinto zezithombe nokulandelana. izithombe. Ngokuqondile, lokhu kuchazwa kulandela izincomo ezikwi- "Annex I I" ye-HEIF: Imihlahlandlela encazelweni yamafomethi nezithombe ezintsha ".
Ukuze unike amandla i-AVIF kuFirefox, vele uye cishe: hlela bese ubheka isithombe senketho.avif.enabled.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IMozilla yethule ukwesekwa kwe-AVIF nokwakhiwa kwensizakalo ye-imeyili engaziwa
Inguqulo entsha yeFirefox 76 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
Indawo yokugcina iPopcorn Time ivinjiwe ngemuva kwesikhalazo